Askar Lagu Dilay Dalka Masar – Goobjoog News
Shan askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka waddanka Masar ayaa lagu dilay magaalada Qaahira ee caasimadda waddankaasi, ka dib markii kooxo hubaysan ay askartaas weerareen sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Masar.
Kooxahaan ayaa waxay weerareen bar contarool oo ciidamada ay ku sugnaayeen waxaana dhimatay shan askari, halka shan kalana uu soo gaaray dhaawac.
Weerarka oo ka dhacay gudaha Qaahira, waxaa fulisay koox wadatay labo gaari, mas’uuliyadda weerarkan cidana masheegay balse waxaa la aamisanyahay in weerarada ceynkaan oo kale ah ay geestaan ururka Daacishi.
Kooxo taabacsan feker ahaan Daacish ayaa waxay ku firfircoonyihiin qeybo badan oo ka tirsan waddanka Masar gaar ahaan waqooyiga magaalada Siinaay.
Saddex todobaad ayay aheyd markii markii weerar lagu qaaday meel ay dad ku cibaadeysanayeen taasi oo keentay inay dhintaan dad ku dhow 40 qof.
Garyaqaanka Guud Ee Dowladda Oo Ra’isul Wasaaraha U Sheegay In Sharciga Oo Lagu Tunto Ka Xun Yahay Musuqa